Titan iyo chip yeGoogle yekuchengetedza masystem ako | Linux Vakapindwa muropa
Mumufananidzo wapfuura tinoona kurudyi mufananidzo uye saizi yevaviri Google Titan chengetedzo machipisi. Imwe yacho ndiTitan, chip chinoshandiswa kumaseva uye Google Titan Security Kiyi USB kiyi, nepo imwe iri Titan M, yakadzikiswa vhezheni yemafoni nharembozha sePixel 3 uye Pixel 3 XL mafoni anozotangwa munguva pfupi iri kutevera. kumusika. Navo, Google inova nechokwadi chekuti ichave akachengeteka nharembozha dzeApple munyika, nekuti inounza tekinoroji iyi yekuchengetedza kubva kumaseva kuenda kunhare dzedu ...
Asi chii ichi titan chip? Zvakanaka ndizvo zvandiri kuzosangana nazvo muchinyorwa chino Sezvandakareva mundima yekutanga, idzi mhando dzemachipisi dzinoitwa nezvakasiyana zvigadzirwa zveGoogle. Iyo huru ndeye maseva, sezvazvinogona kuonekwa mumufananidzo pazasi kuruboshwe mumufananidzo mukuru. Uye imwe ndiyo kiyi inoratidzwa mumufananidzo wekumusoro kuruboshwe… Nekiyi kiyi yekuchengetedza yeUSB unogona kuva nemidziyo inopesana nehunyengeri nekuda kwehunyanzvi hwekutangisa iyo yainoshandisa, chengetedzo huru kune vashandisi nemakambani. Kana iwe uchifarira unogona kuzvitenga pa googlestore, sezvaungagone kuchengetedza iyo Pixel 3 kubva panzvimbo imwechete ... Zvino, chinoita kuti smartphone, maseva uye kiyi chigadzirwa chakachengeteka chive chip chavanochengeta mukati, iyo Titan Titan kana Titan M vhezheni:
-Titan M- Ine chip, unogona kudzora iyo Android yakachengeteka bhuti maitiro, pamwe nekuchengetedza yazvino vhezheni vhezheni yesisitimu zvakachengeteka kudzivirira kurwiswa kunoenderana neshanduro dzeshanduro ye firmware. Iyo zvakare inodzivirira kuyedza kuvhura bootloader yekumhanyisa chero imwe firmware, kunze kwekunge iyo passcode yapinda uye yabvumidzwa. Iyo Hardware ichave zvakare iri pamusoro pekutarisa iyo yekuwana kodhi kune iyo yekuvhara skrini, kugadzirisa iyo sensor yekuchengetedzeka mafinger prints, kudzikamisa huwandu hwekuyedza kuwana iyo chikamu kuti vadzivise hutsinye hwekurwiswa nechisimba, uye vese neruzere rusununguko, uye kubva kune yakachengetedzwa flash memory . Pakupedzisira ichadzivirira akakosha mashandiro kudzivirira matambudziko ekuchengetedza. Chinhu chimwe chete chakashata chandinoona ndechekuti chingagumise kushandiswa kweanofarira-akachinja maROM ayo anogona kuiswa pane mbozhanhare ...
-Titan: ndiyo chip inoshandiswa mumaseva eGoogle Cloud uye data data, kupa zvisati zvamboitika chengetedzo. Kufanana neye yapfuura, Titan iri zvakare mutariri wekumisikidza yakachengeteka maboot protocols emaseva aya. Zvese zvinochengetedzwa neichi chidiki chekushandisa chip.Izvi zvinoitwa nekutenda kune yemukati yekrisimasi injini.Chip iyi inogona zvakare kuongorora uye kugadzirisa masisitimu echokwadi (marogi, mapassword, masiginecha, ...) kuti zviwedzere kusimba.
Ndokunge, neaya machipisi, ese maviri maAroid zvishandiso, mune ino nyaya Google Pixel 3 zvichienda mberi, uye Google maseva nevaya vane Titan Security Key, vanogona kunge vaine izvi zvekuchengetedza matanho pamakomputa avo, chimwe chinhu chakafanana neicho chinoitwa muApple ne chips Apple T-Series senge T1 uye T2, zvakare yakavakirwa paARM uye inoitirwa kuchengetedza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Titan iyo chip yeGoogle yekuchengetedza masystem ako
Stallman anopa kurudziro yekutungamira hurukuro munharaunda yeGNU